နောက်ဖက်..ကျားများဆီသုို့ ခရီးသွားဧည့်သည် (အပုိုင်းသုံး) ~ Shannilay
နောက်ဖက်..ကျားများဆီသုို့ ခရီးသွားဧည့်သည် (အပုိုင်းသုံး)
ရွှေပြည်မြင့် သျှမ်းနီရှေးဘုရားစေတီ ဆယ်ဇင်းကျေးရွာ
မုိုးကဖွဲဖွဲဆုိုင်ကယ်က ဗြဲဗြဲနဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ကုန်းမနရယ်ပေါ့.. ဆုိုင်ကယ်သမားက ကျင်းတွေချိုင့်တွေကုို ရှောင်ကာတိမ်းရင်းမောင်းရင်းနဲ့ .. တနာရီခန့် အရောက်မှာတော့ တွေ့ပါပြီ ရှေ့မှာ ဈေးဆုိုင်တန်းနဲ့ ဓါတ်ဆီပုလင်းတွေ ထောင်လုို့ရောင်းနေတဲ့ ဆုိုင်တွေကလည်း ကားလမ်းဒီဘက်ဟုိုဘက် တဖက်တချက်မှာပေါ့… ဆုိုင်ကယ်သမားက.. ဒါ..ညောင်ပင်က လမ်းခွဲပဲအကုို.. ဒီကနေသွားရမှာ.. အိမ်မှာခဏစောင့်ရအောင်…ဟုိုဘက်က လူတွေလာဦးမှာ ဆုိုပြီး အိမ်နဲ့ဆုိုင်တွဲထားတဲ့ သူနေရာလေးစီ မောင်းသွားပါတော့တယ် …ကျနော့်ဆုိုင်ကယ် သမားကတော့ သူ့အဖေနဲ့ အတူဆုိုင်ကယ်အပြင်ဆုိုင်လေးနဲ့ ကွမ်းဆုိုင်လေးပါ ဖွင့်ထားပါတယ်..
နာရီဝက်ခန့် စောင့်နားနေခုိုက် လာကြလေပြီ ဆုိုင်ကယ်သံများ ဒုံးဒုံးဒုိုင်းဒုိုင်းနဲ့ မုိုးညှင်း၊ ဟုိုပင်ဘက်ကနေပေါ့ အနည်းဆုံးဆုိုင်ကယ် ရှစ်စီးခန့်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်.. နောက်ရောက်လာတဲ့ ဆုိုင်ကယ်တွေ မထွက်ခင် ပြန်စစ်ဆေးကြလုပ်ကြပေါ့.. ကျနော့်ကုိုလုိုက်ပုို့မဲ့ ဆုိုင်ကယ်သမားချာတိတ်က ကဲအဆင်ပြေရင်ဆွဲမယ်... ဆုိုပြီး အော်လုိုမှ အားလုံး စီးတော်ယာဉ်ကုို ခွကြပြီလေ.. အဲ့.ဒီမှာ..ကျနော့်ဆရာလေးက ညှပ်ဘိနပ်နဲ့ ကျနော်ကတော့ အနောက်ကလုိုက်သမားဆုိုတော့ ..ခပ်လန့်လန့်ပေါ့.. စလည်းထွက်ရော ကုိုယ့်ဆရာက ရှေ့ကတည်မောင်းရသူလေ သူမောင်းတဲ့.. လမ်းကြောင်းအတုိုင်း နောက်လူတွေက လုိုက်မောင်းရတယ်.. ဒါတောင်သူက အရှေ့လမ်းကောင်းတဲ့ နေရာလေးဆုို သူလူတွေပြန်စောင့် အားလုံးဆုံမှပြန်ထွက်… သူရဲ့ မောင်းချက် .. ကျွမ်းကျင်ပုံတော့မပြောပါနဲ့ ..အမှန်တကယ်ပါ.. ဂျိန်းစပွန်းတောင်လုိုက်မှီမယ် မထင်ဘူး ကျနော်တချက်မှ လမ်းဆင်းမလျှောက်ရဘူး.. ကျွမ်းကျင်ရာလိမ်မှာလုို့ဆုိုမလား..ပဲ..
ဂျိန်းစပွန်းမမှီတဲ့ အင်းတော်ကြီး ဆုိုင်ကယ်သမားများ
ဆုိုင်ကယ်က ဗြဲဗြဲ.နဲ့. မုိုးကလည်း ဖွဲဖွဲပေါ့..တက်လုိုက်ဆင်းလုိုက် ကွေ့လုိုက်ကောက်လုိုက်နဲ့ သွားနေတုန်း တောထူတဲ့တောင်ကုန်းလေး တကုန်းအလယ် လောက်လည်းရောက်ရော နတ်စင်တခုကုိုတွေ့ပါသည် ကျနော့်ဆရာက ဆုိုင်ကယ် ဟွန်း တီး..တီး.. တီး.. ဆုိုသုံးချက်နဲ့ တီးပြီးကန်တော့ပါတယ်..နောက်က ဆုိုင်ကယ်တွေလည်း ဒီလုိုပဲ နတ်စင်တဲ့တဲ့ ရောက်သူတုိုင်း သုံးချက်စီ တီးပြီးကန်တော့ကြပါတယ်..
ဒါကတော့ ဒုို့သျှမ်းတွေရဲ့ ထုံးစံပဲ သျှမ်းပြည်ကြီးထဲမှာလည်း ဒီလုိုပဲ ဒုို့ရုိုးရာလေးတော့ မမေ့ကြပါလား လုို့ကောက်ချက် ချမိပါတယ်…
အမှတ်မထင် မုိုးကလည်း သည်းကြီးမဲကြီးရွာပါတော့တယ် ဆုိုင်ကယ်သမားတွေကလည်း ဇွဲကြီးကြီးနဲ့မောင်းရင်း ရွားတန်းလေးတခုကုိုရောက်လုို့ ဆုိုင်တဆုိုင်ဝင်လုိုက်ကြတယ် ကျနော်လည်း.. လက်စွဲလေးကုို တချက်နှစ်ချက်ဝေးလုိုက်ချိန်မှာပဲ ဆုိုင်ကယ်သမားလေးက အကုို.. ကျနော်တုို့ဒီအထိပဲ.. လုိုက်ပုို့လုို့ရတော့မယ် စက်လှေဆိပ်ကုိုပုို့လုို့ မနုိုင်တော့ဘူး ဒီမုိုးနဲ့ လမ်းမှာတောင်ကျရေများပြီတဲ့…
ဒီလုိုနဲ့ဆုိုင်ကယ်သမားလေးကပဲ အကုို့ပစ္စည်းတွေ လုံအောင်ထုတ်မှနော် ဆုိုိပြီးဆုိုင်ရှင်စီက ပလပ်စတိတ်တွေတောင်းပြီး လက်စွဲတော်လေးကုို လုံအောင်ထုတ် ညှပ်ဘိနပ်လေးကုို လက်မှာလျိုပြီ သူတုို့ကုိုနှုတ်ဆက်ကာ ကုိုယ်ပုိုင်ဖိယှက်လေးနဲ့ပေါ့ ဖိလုိုက်.ယှက်လုိုက်နဲ့ လျှောက်လာခဲ့တာ နာရီဝက်ခန့်အရောက်မှာတော့ လမ်းကုိုမမြင်ရတော့ပဲ ရေအုိုင်ကြီး တခုကုိုပဲတွေ့လုိုက်ရပါတော့တယ် ဖြတ်လျှောက်လုိုက်တော့ ရေက ခါးလည်လောက်ရှိနေတယ်.. မလှည်းအောင် မနည်းလျှောက်နေရတယ် ကျနော်တုို့က ပွင့်ဘိနပ်လည်းမပါ နောက်ကလူတွေက တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကျနော့်ကုိုကျော်တက်ကြပေါ့.. လုံးကြွယ်ကတော့ စက်လှေမမှီမှာဆုိုး၍ ထင်တယ်ရှေ့က တုတ်ခြေတင်ပြီးသွားနင့်ပြီ ကျနော်လည်း လျှာထွက်မတတ် အနောက်ကလုိုက်နေရပြီပေါ့..
ရွံ့တွေဗွက်တွေ..ရေတွေကုို ဖြတ်လျှောက်ရင်း မုိုးတိတ်သွားတာတောင် သတိမထားမိပါ.. တောင်းကုန်းလေးတခုမှာ နားမယ်လုို့လုပ်ခါမှ မထင်မရှား ဆုိုင်းဘုတ်လေးက ကြိုဆုိုပါ၏တဲ့.. အော်အခုမှပဲ ရောက်ပါပေါ့လား ညောင်ပင်က စက်လှေဆိပ်လုို့ .. သက်ပြင်းချမိပါတော့တယ်… လုံးကြွယ်စောင့်နေတဲ့ ဆုိုင်ထဲမှာပဲ ဆုိုင်ရှင်က မီးဖုိုပေးလုို့ မီးလုံရေနွေးသောက်နဲ့ ခေါက်ဆွဲစားရင်း အနောက်ကတဖွဲ့ကုိုစောင့်နေရင်းပေါ့ ..သိပ်မကြာလုိုက်ပါ.. စက်လှေဆိပ်က အော်သံကြားရေလေပြီ ရီးသည်တွေ ထွက်မယ်.. ဒီတော့ သူ့အိပ်ကုိုယ့်အိပ်လေးစွဲပြီး တောင်ကုန်းအောက်ဆင်းကာ စက်လှေပေါ်တက်ကြပါတော့တယ်.. ချောင်းလေးက သိပ်ကျယ်ပါ စက်လှေတစ်စီး မောင်းနုိုင်ရုံတာတာပဲ.. စက်လှေလည်းစထွက်ရော ရာသီဥတုက သာယာနေပြီမုို့.. လက်စွဲတော်လေးထုတ်ပြီး ဒီရုိုက်ဟုိုက်ရုိုက်ပေါ့.. တသွင်သွင် စီးဆင်းနေတဲ့ ချောင်းရေနောက်ကျိကျိ နဲ့အတူ ကျနော်တုို့စက်လှေလေးက ဟုိုဘက်ကမ်းကပ်လုိုက် ဒီဘက်ကမ်းကပ်လုိုက်ပေါ့..
ချောင်းဖျားပုိုင်းမုို့ထင်ပါသည် သစ်ရိပ်တောရိပ်ကတော့ ကောင်းသား တခါတခါ အနားကပ်မှ ထပျံတဲ့ ကျေးငှက်တုို့လည်းရှိသေး.. တဖြေးဖြေးနဲ့ ချောင်းကလည်းနဲနဲကျယ်လာ သစ်ပင်ကြီးတွေကလည်း မြင်သာဆုိုတော့ တွေ့ပါပြီဗျာ သစ်ခုိုးထုတ်သူတွေ.. ခုိုးသာတော့ခုိုးပါ ဒါမဲ့စည်းကမ်းလေးတော့ ရှိစေချင်ပါတယ်.. လွှခုိုးစွဲထားတဲ့ သစ်စတွေကုို ချောင်းထဲမှာပဲ ပစ်ချထားကြတယ်လေ.. ချောင်းကျယ်လာလေ သစ်ပုံသစ်စတွေက ချောင်းထဲပစ်ချထားတဲ့ ဟုိုတပုံဒီတပုံကများလာလေပေါ့.. ခရီးသွားဖော်တယောက်က ပြောပါတယ် နွေရာသီဆုို ကုန်းပေါ်လမ်းမှာ ကားဆုိုင်ကယ်ပေါက်တယ်တဲ့.. အခုမုိုးဆုိုတော့ စက်လှေလေး ဒုံးဒုံးဒုိုင်းဒုိုင်းနဲ့ပေါ့.. ပြန့်ပုိုင်းလေးလည်းရောက်လာလေ မြေနီနီကျောက်ခဲတွေက ချောင်းထဲထိ တရှိန်ထုိုး ထုိုးဆင်းလုို့.. ဘယ်လောက်ထိမြေဇာတွေ ချောင်းထဲကုိုပစ်သလဲဆုိုရင် စက်လေတောင် မမောင်းနိုင်တော့လုို့ အားလုံးဝုိုင်းတွန်းရတဲ့အထိပေါ့ .. စီးတခါ တွန်းတလှည့်ပေါ့ ဆယ်ဇင်းရောက်ဖုို့ နှစ်နာရီလောက်အလုို တနေရာအရောက်မှာတော့ ရေလမ်းကြောင်းပြောင်းလုို့ အနိမ့်ပုိုင်းက ရွာဦးကျောင်းနဲ့ စေတီဘုရား ရေပတ်လည် ၀ုိုင်းနေတဲ့အထိပါ..
၀ိသမလောဘသားတုို့ကြောင့် အဆိပ်သင့်နေတဲ့ ဥရုမြစ်
ရေပြင်ကျယ်ချောင်းအလယ်က မောင်းလာတဲ့စက်လေ ဘယ်ကုိုကြည့်ကြည့် တူးနေလုိုက်ကြတဲ့ ရွေမြောတွေက အပြိုင်ဆုိုင်ပေါ့ မကြာမှီကမ်းစပ်ထိပ်တခုမှ လူအုပ်ကြီးက စီးလုို့ကြိုနေပြီ ရောက်ပါပြီဆယ်ဇင်းဌာနေ… ဆုိုင်ကယ်..ကယ်ရီ အော်သူအော် တည်းခုိုးခန်းအော်သူအော်..ကျနော်တုို့လည်း ဖြတ်လျှောက်လာခဲ့ရာ ဥရုချောင်းကုို ဖြတ်ဆောက်ထားတဲ့ ကားဆုိုင်ကယ် မောင်းနင်နုိုင်တဲ့ သစ်သားတံတာကြီးပါ တံပေါ်တက်လုိုက်စဉ်မှာ ကျနော်တုို့ တက်လုိုက်တဲ့ ကမ်းဘက်ခြမ်းက ကချင်ပြည်နယ်မှ နုတ်ခွန်းဆက်ပါ၏တဲ့ တံတားဟုိုဘက်ကုို ဖြတ်လျှောက်သွားတော့ စစ်ကုိုင်းတုိုင်းမှ ကြိုဆုိုပါ၏တဲ့…ဒီလုိုနဲ့ စစ်ကုိုင်းတုိုင်း ဆယ်ဇင်းမှာ တညတာအိပ်လုိုက်ကြပါသည်။
မြူခုိုးတဝေေ၀နဲ့ ရတနာမြေဟာ အာရုံဦးအလှမထူးတဲ့အပြင် ဆူညံနေတဲ့ .. စကားသံ ကားသံတွေနဲ့အတူ သူသူငါငါလူပ်လူပ်ရွရွ ဈေးဝယ်သူရောင်းသူ ရွေတူးသွားမယ့်သူများက ဟုိုတစုသည်တစု.. လုံးကြွယ်နဲ့ ကျနော်လည်း ဗုိုက်ကလေးဖြေ့လုို့ အပြေးချီလုိုက်ကြပြီ ဦးအာလောက ကျောင်းတုိုက်ဆီသုို့..
ကံကောင်းထောင့်မှစွာပဲ ဘုန်းဘုန်းကလည်း ကျောင်းမှာအစဉ်သင့် လာရင်းကိစ္စကုိုပြောပြလုို့ ဘုန်းဘုန်းကဆုိုင်ကယ်စီပေး မယ်ငါ့ကောင်လေးတွေ ရှိတယ်ဆုိုပြီး ဆုိုင်ကယ်သမားမရောက်လာမှီ ရှေးဟောင်းနောင်းဖြစ် ပုရပုိုက်အကြောင်း ဘုရားဟောင်းအကြောင်း ပြောကြဆုိုကြပေါ့… ဆယ်ဇင်းနယ် တလျှောက်မှာတော့ ရှေးဟောင်းစေတီတွေ အများမပြားပါ ဒါမဲ့အထင်ကရရှိလှတဲ့ စော်ဘွာတွေတည်ခဲ့တဲ့ ပန်ချယ်စေတီ နဲ့ ရာလားတီး ရှေးဟောင်းစေတီတုို့ကုိုတော့ ပြန်လည်ပြုပြင် ထပ်မံတည်ထားပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဘုန်းဘုန်းကပြောပါတယ်.. ပန်ချယ်စေတီကတော့ လယ်ကွင်းတွေရဲ့ အလယ်မှာ ထီးထီးအဖြစ်ဝေးက မြင်နုိုင်ပါတယ်.. ထုိုလယ်ကွင်းတွေကတော့ တပ်မတော်လယ်စုိုက်ခင်း တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် သမုိုင်းဝင် ရှေးဟောင်းစေတီကုို တာဝန်ကျ ဗုိုလ်မှူးက ဦးစီပြီး ရွာသားတွေနဲ့ အတူ ပြန်တည်ခဲ့တယ်လုို့ ဆိုပါတယ်.. သမုိုင်းဝင်ဘုရားမုို့ လယ်ကွင်းတွေအလယ်မှာ ထီးထီးကြီးအဖြစ်နေတာပါ..
ရာလားတီး ရွှေစင်းတုတော် ၅ဆူနှင့် စော်ဘွား သံမောက်ဓါးရရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းဘုရား
ရာလားတီး ရွာဦးမှာရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းစေတီကြီးကတော့ ညောင်ပင်ကြီးကမြိုထားပြီး ဌာပနာပြိုကျနေရာက ဘုရားဆင်းတုတော်တွေကုို တွေ့ ရှိရတယ်လုို့ဆုိုပါတယ်။ ထူးခြားသာက ဘုရားဆင်းတုတော်တွေထဲမှာ ဘုရားငါးဆူက ရွှေသားစစ်စစ်နဲ့ဖြစ်ပြီး ရှေးစော်ဘွားများဆောင်းတဲ့ သံခမောက်တလုံး ဓါးတလက်ပါ ရရှိတယ်လုို့ ဘုန်းဘုန်းကပြောပါတယ်.. ကျနော်လည်း ဘုန်းဘုန်းဓါတ်ပုံမရုိုက်ထားဘူးလား လုို့မေးတော့ .. အေးရုိုက်ထားတယ်.. သူပြန်ရှာတယ် နောက်သတိရသွားပုံပေါက်တယ် ကသာမြို့က ရုံပုိုင်လင်းမယားလာတုန်းက ရချင်တယ်ဆုိုလုို့ လူလုိုက်ပါတယ်တဲ့ …ကဲ့.. ကျနော်တုို့ သျှမ်းနီတွေများ ရက်ရောလုိုက်ပုံ… ကုိုယ့်လူတွေအတွက် ပြစရာလေးတောင် မထားလုိုက်ကြဘူး… ဘုန်းဘုန်းကဆက်ပြီး ငါပြောလုိုက်ဦးမယ်.. မောင်..မင်းကုို… ငါ..ဒီကျောင်းမရောက်ခင် ဒီကျောင်းနာမည်က တုိုင်းမှူး မြင့်စုိုးတက်တော့ ရွှေပြည်မြင့်တဲ့.. တခါ တုိုင်းမှူးသာအေး တက်လာပြန်တေ့ာ ရွှေပြည်အေးတဲ့ နောက်တယောက်တက်လာရင် ဘာဖြစ်ဦးမယ်မသိပါဘူးကွာလုို့ ဆိုတော့.. စောစောက စော်ဘွားခမောက် ဓါတ်ပုံမရလုို့စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေရတာ.. အခုတော့ ငုိုအားထက် ရေးအားသန်ခဲ့ရပါတယ်….
ဘုန်းဘုန်းကပဲ.. အေး.. မင်းတုို့ဆက်သွားမဲ့ နေရာမှာ.. နောင်ပုိုအောင် ဆုိုတာရှိတယ်.. အဲ့ဒါ..နောင်ပုိုအောင် မဟုတ်ဘူး.. ငါတုို့သျှမ်းနီလုိုက နောင်ပူအောင် နောင်ဆုိုတာ အင်း ပူအောင် ဆုိုတာ ပူဆုိုတာက “အဖုိုး” အောင်ကနာမည် .. အဲ့ဒါကုို ဘာမသိညာမသိတဲ့ ကောင်တွေရောက်လာပြီး နာမည်ဖျက်ချင်တော့ နောင်ပူအောင်လုို့ခေါ်တော့ အပူအပင် အပင်များတယ်ဆုိုပြီး အပုိုအစာများအောင် နောင်ပုိုအောင်ပြောင်းတယ်ဆုိုပြီ လုပ်ကြပြန်ရော … တခါ ငါတုို့က ဆုိုင်းနမ့် လုို့ခေါ်တယ် ဆုိုင်းဆုိုတာ သဲ နမ့်ကရေ သူတုို့ လာပြန်ပြီ.. သျှမ်းတ၀က် ဗမာတ၀က်ဖြစ်အောင် သဲနမ့်..တဲ့ ငါတုို့ ပုတ်ဆေ လုို့ခေါ်တယ် သူတုို့က လုပ်ပြန်ပြီ ပုတ်သုိုတဲ့.. မကောင်းကုန်တော့ဘူး ငါတုို့သျှမ်းနီတွေငြိမ်ခံနေတော့..ဟုစိတ်မကောင်းစွာပြောပြီး… အားလုံး .. တိတ်စိတ်နေချိန်မှာပဲ ဆိုင်ကယ်သံကြားလုိုက်ရပါသည်။ လာကြိုသူများ…
ကျနော်နဲ့ လုံးကြွယ်လည်း ဘုန်းဘုန်းအား ရှစ်ခုိုးပြီး ဆုိုင်ကယ်နောက်ကုို လက်စွဲတော်ကုိုင်ပြီး လုိုက်ကြလေသည်။ ဥရုချောင်းကြီးနဲ့ လာဆုံတဲ့ ချောင်းတခုနားမှာတော့ ထုိုချောင်းငယ်ကုိုဖြတ်ကာ ချောင်းဆုံ ချောင်းကူးတံတား ဆုိုပြီးဆောက်နေပါတယ် မပြီးသေးလုို့ ဘော့ကူတုို့ကနေ ကူရပါတယ်..တဖက်ကုိုရောက်တော့ လမ်းတလျှောက် လယ်ကွင်းဆုိုလုို မယ်မယ်ရရ မရှိတော့ပါ.. အားလုံးရွှေတွင်းတွေကြီး ဖြစ်ကုန်ပါသည်။ စက်မျှောကြီးများဟာလည်း လမ်းဘေးဝဲယာတလျှောက်.. အပြိုင်အဆုိုင်ပါ.. မြေတူးစက်ကြီးများဟာလည်း ရောင်စုံပန်းတွေလုို အ၀ါအစိမ်း အနီအပြာ အရောင်စုံနဲ့အတူ အနားမပေးတူးနေကြပါတယ်..
ဒီလုိုနဲ့ ကျနော်တုို့လည်း ပန်ချယ်ဘုရားစေတီရော၊ ရာလားတီးစေတီဟောင်း ကုိုလည်း ဓါတ်ပုံတွေရုိုက်ပြီး ပြန်အလာ လမ်းမှာတော့ မြန်မာပြည်မြို့ကြီးများမှာတောင် မတွေ့ရသေးတဲ့ ဘက်ဖုိုးမြေးတူးစက်ကြီးများ အသစ်စက်စက်တွေကုို ရောင်းရန်လုို့ရေးထားတဲ့ ခြံဝန်းကြီးထဲမှာ ခြောက်စီးခုနှစ်စီးထားပြီ ရောင်းနေတဲ့နေရာသုံးခုလောက်လည်း တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ မြေတူးစက်များပြုပြင်ရေး ဆုိုတဲ့ ဆုိုင်းဘုတ်တွေကလည်း လမ်းတလျှောက်အပြည့်.. နောင်ငါးနှစ်လောက်များကြာရင် ဒီဒေသခံတွေ ဘာလုပ်စားကြပါ့မလဲ လုို့လည်းတွေးရင်း ဒီလောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်ဆီးနေတာကုို နုိုင်ငံတော်က မသိကျိုးကျွန်ပြုရက်လေခြင်း.. NGO လုိုခေါ်တဲ့ အစုိုးရအမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တုို့ မြစ်ချောင်းအင်းအုိုင်များဆုိုင်ရာ.. ဆရာတွေလည်း ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်လုို့ တွေးရင်း တည်းအိမ်ရောက်လာလုို့ တညသာအိပ်စက်လုိုက်ရလေပြီ…
နောက်တရက် နံနက်လင်းလုို့ စက်လှေစီးကာ နန်တောသုို့ ဆုန်ဆင်းကြလေသည်။ စီးမြဲစီးဆဲစီးဆင်းဖြစ်တဲ့ ဥရုမြစ်ကြီးကုို ဥဒဟုိုဖြတ်မာင်းနေတဲ့ စက်လှေကြီးငယ်တွေ ဟာတေ့ာ သစ်ဝါးဖောင်များ သယ်ဆာင်ပြီးပြေားဆွဲတာကုို မတွေ့ရပဲ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ပေပါများ ပြည့်ညှပ် တင်ဆောင်လုို့ မောင်းနင်နေတာကုိုပဲတွေ့ရပါတယ်..
နောက်ဖက်က နုိုးထလာတဲ့ ကျားမြို့လေး နန်တော
ညနေပုိုင်းလောက်မှာတော့ ရောက်လေပါပြီ ရွှေနန်တောဆီ နန်တောသည် ဆိပ်ကမ်းမြို့ငယ်လေး တမြို့နှင့်တူပါသည်။ တုိုက်တွေကလည်း သုံးထပ် လေးထပ်နဲ့ ဒေသခံသျှမ်းနီတွေဟာ .. ထောသူထော မွဲသူမွဲ ကွဲသူကွဲပေါ့.. အမှန်အတုိုင်းပြောရပါလျှင် နန်တောသည် စံပြကျေးရွာလုို့ဆုိုပေ နုိုးထလာတဲ့ အနောက်ဖက်က ကျားမြို့လေးနဲ့တူပါသည်။
ကျနော်တုို့တည်းခုိုတော အိမ်မှာတော့အိမ်ရှင် ဇနီးမောင်နံသည် သျှမ်းနီတွေဧည့်ဝတ် ကျေတယ်ဆုိုတာ ဒီလုိုမျိုးလားလုို့တောင် မေးရမလုိုဖြစ်ပါသည်။ သျှမ်းနီကြိုက်တဲ့ မြစ်စိမ့်ချက် ဟင်းလော် ငါးအုံးတွေနဲ့ ပြန်ပြောရင်း သွားရည်များတောင်ကျမိ..
ထမင်းစားပြီး ရေနွေးသောက်ကြရင်း စကားစပ်မြီးလုို့ နွေတုန်းက နန်တော်မီးဟာ ဘယ်လုိုဖြစ်ပြီး စတင် မီးလာင်သလဲဗျ .. လုို့မေးတော့ အားလုံးလုိုလုိုပဲ .. ခပ် ပေါ့ပေါ့လေးပေါ့.. အရက်ဖုိုက အရက်ချက်ရောင်းတဲ့သူက စလောင်တာလေ.. သူ့အိမ်ဘေးမှာတော့ ဓါတ်ဆီရောင်းတဲ့ သူလည်းရှိတာပေါ့.. ဒီလုိုနဲ့ မေ့မေ့လျှော့လျှော့ပါ.. စလောင်တဲ့လူကုိုရော အရေးယူသလား ဆုိုတော့လည်း ဘယ်ရောက်နေမှန်းတောင် မသိ...။ အဲ့လူက ဘယ်နယ်ကလည်း ဆုိုပြန်တော့လည်း ရေရေရာရာမသိ.. ဒီနယ်ခံလား ဆုိုပြန်တော့လည်းမဟုတ် .. ဘယ်လုိုပဲဖြစ်ပါစေ လူခုိုးရင်ကျန်သေးတယ် မီးခုိုးပြီဆုိုရင်တော့ ဘာမှချန်မှာမဟုတ်ဘူး .. အားလုံးပြောင်မှာပဲလေလုို့.. ပြောပြီးကျနော်က စကားဖြတ်လုိုက်ပေါတော့တယ်..
နန်တော ရွာထိပ်က ရွှေလုပ်ကွက်
ကျနော်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ..ဖားကန့်၊ စိမ့်မှု (ဆုိုင်းတောင်) တုို့ဟာ လူစီပြီလား.. ဈေးကွက်ကောင်းပြီလား ဆုိုရင် မီးလောင်ပြီ.. စုံစမ်းလုိုက်ရင် တနယ်တကျေးက အိမ်ငှါးလာလုပ်သူတွေ ဇာတိက ဘယ်ကမှန်းမသိ ဒီလုိုနဲ့ပဲ.. ဘယ်ကစလုို့ ဘယ်လုိုလောင်လည်း.. အဲ့ဒီလူ.. အခုဘယ်မှာလည်း.. ရုိုးရောရုိုးရဲ့လား တုို့မီးလား ရှို့မီးလားဆုိုတာကုို သျှမ်းနီတွေ လေ့လာစုံစမ်း ထောက်လှမ်း အကဲဖြတ်တဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် အစုအဖွဲ့ဆုိုတာ မရှိပါ။.. ဘယ်လုိုပဲဖြစ်ဖြစ် သျှမ်းနီတွေဟာ ကျောက်စိမ်းထွက်တဲ့ နေရာမှာမွေး ကျောက်စိမ်း ထွက်တဲ့ နေရာမှာကြီးပြင်းလာပြီ သူများတွေကုိုအတုမယူ သတိမမှုတော့ သူများချမ်းသာသလောက် မချမ်းသာပါ ကုိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း အသင်းအဖွဲ့ အုပ်စုနဲ့ အပြုသဘောဆောင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ အမှုအကျင့် အားအနည်းဆုံးလူမျိုးတွေပါ.. ဒါကြောင့်လည်း လူမျုိုးစုအငယ်လေးတွေရဲ့ နုိုင်စားမှုတွေ နဲ့အတူ.. မော်ကြာဘ၀နဲ့ သံတုိုင်လည်းတုို လူလည်းအုို ပေါက်ပြားလည်းကွဲ ဘိန်းလည်းစွဲပေါ့။... အခုရွှေထွက်ပြန်တော့လည်း .. အိမ်ဝင်းလည်းပြောင် လယ်လည်းပြောင်. ကြောပြောင်လူသား လူ့ငနွား မဖြစ်စေကြဖုို့တော့ လုိုလိမ့်မယ်လုို့.. တွေးမိရင်းတညာ ဘ၀ခရီးအတွက် အိပ်စက်အနားယူလေပြီ…
နောက်ဖက်..ကျားများဆီသုို့ ခရီးသွားဧည့်သည် (အပုိုင်းတစ်-နှစ်) *"۩"*
ဆက်လက်၍ အပုိုင်း လေးသုို့ အားပေးကြပါရန်